Etu esi mepụta asọmpi #Hashtag na Social Media | Martech Zone
Mgbe ị na-agba asọmpi ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ, ntinye ụdị nwere ike mmenyenjo nwere ike sonyere pụọ. Asọmpi hashtag na-ewepụ ihe mgbochi ndị ahụ ịbanye. Ndị na-eso gị kwesịrị iji naanị hashtag gị, a ga-anakọta ntinye ha na ngosipụta na-adọta anya.
ShortStack asọmpi hashtag na-enye gị ohere ịnakọta ihe ndenye hashtag site na Instagram na Twitter mgbe ị na-eme ka mmekọrịta gị na ndị fanye.
Chịkọta Afọ Ndị Emepụtara Onye Ọrụ ma weghachite Ndị Nnọchite Anya
Asọmpi hashtag bụ ụzọ kachasị mfe iji kpokọta ọdịnaya sitere n'aka onye ọrụ (UGC), bulie mmata ngwa ahịa, wee rute ndị na-ege ntị ọhụụ. Ọ dị mfe karịa mgbe ọ bụla iji gosipụta UGC edozi na weebụsaịtị gị, onye ọ bụla nwere ike iji hashtag sonye na asọmpi gị. Ndị mmadụ na-ekere òkè na mgbasa ozi UGC nwere ike ịghọ ndị ahịa.
Nwere ike ịgba ọsọ asọmpi hashtag na-enweghị ọdịda ọdịda. Agbanyeghị, maka ndị chọrọ igosipụta ihe ndenye na ịnakọta adreesị email, ShortStack nwere ụfọdụ ndebiri ga-eme aghụghọ ahụ.
ShortStack ga - achịkọta onyonyo niile, vidiyo, ederede, na aha njirimara ndị jikọtara na hashtags ọ bụla (yana maka Instagram, profaịlụ @mention) ị ezipụta. Mgbe ahụ ị kwụgoro ma gosipụta ọdịnaya ahụ, ma jiri ya na njikọta ikike ịtụ vootu na nkekọrịta anyị.
Nke kachasị mkpa, ịnwere ike iji ngwa njikwa ikike nke ShortStack nweta ikike iji UGC ị nakọtara na Instagram na Twitter, ichebe azụmahịa gị ma gbanwee UGC ka ọ bụrụ ọdịnaya ahịa ahịa.
ShortStack na-eme ka ịhọrọ ndị mmeri gị dị mfe. Mgbe ịtọsịrị ndepụta hashtag, a na-anakọta ndenye na Njikwa ndenye kama ị nwere ike ịmepụta onye mmeri na nke anyị Random Ntinye Selector.
Etu esi emepụta ihe eji eme Hashtag na ShortStack
Mgbe ị na-eme mkpọsa hashtag, Ngwaọrụ Ntugharị ShortStack eji iji gosiputa ma jikwaa ndenye. Ejikọtara Wijetị Ntuli aka na ndepụta, ebe echekwara posts sitere na ndepụta ahụ.
Etu esi emepụta ihe ngosi Hashtag na Twitter
Nke a bụ usoro ịtọlite ​​ndepụta hashtag Twitter gị:
Site na Dashboard gi, pia Nri n'elu.
Pịa acha anụnụ anụnụ Nri Ọhụrụ bọtịnụ.
A ga-enye gị nhọrọ nke ụdị nri ịchọrọ ịtọ. Họrọ Twitter.
Ọ bụrụ na ịnweghị, ị ga-ahụ ka mmapụta ga-apụta. Mmapụta a na-emepe Twitter, ma nye gị ohere inye ShortStack ikike iji akaụntụ Twitter gị maka ngwa ọrụ a. Banye (ọ bụrụ na ọ dị mkpa), wee pịa Nye ikike App bọtịnụ ịnọgide.
Jiri ubi nyere aha nri ọhụrụ gị. Ọzọkwa, họrọ Nkọwapụta Companylọ ọrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka e tinye ndenye na ndepụta ọhụrụ, họrọ Akpaghị aka mepụta ndepụta ọhụrụ - ma, họrọ ndepụta dị ugbu a site na ndọpụta.
Ugbu a ị ga-enweta nhọrọ nke ụdị ndepụta Twitter ịchọrọ ịmepụta. Họrọ hashtags.
Na ubi nyere, tinye hashtag ị chọrọ iji dọpụta ndenye. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji ọtụtụ hashtags, kewa onye nke ọ bụla na a rikoma; mara na ọ bụrụ na ị na-eji ọtụtụ hashtags, ndepụta ahụ ga-adọta ndenye na-eji hashtag niile enyere. Ihe nlere ga - egosiputa aka nri ya na ihe post kwesiri itinye ka adota ya.
I nwekwara ike pịa ndenye niile ịgbanwe ụdị ndenye ị chọrọ ndepụta sere, ma ọ bụ pịa na Iji aka ka ịgbanwee n'etiti ihu ọma ụdịdị maka ndenye gị.
Ozugbo ịmechara, pịa acha anụnụ anụnụ Gaa n'ihu bọtịnụ.
Site n’ebe ahụ, tinye oge mbido na nkwụsị; Ọzọkwa, họrọ oge mpaghara.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye aha njirimara Twitter na ndepụta aha ojii, ma ọ bụ tọọ ọnụ ọgụgụ kachasị nke ndenye site na onye ọrụ ọ bụla, pịa Gosi Ntọala di elu, ma mee mgbanwe n’ebe ahụ. Mgbe ịmechara, pịa Chekwa & Wepu.
Etu esi emepụta Hashtag Contest na Instagram
Nke a bụ usoro ịtọlite ​​ndepụta hashtag Instagram gị:
A ga-enye gị nhọrọ nke ụdị nri ịchọrọ ịtọ. Họrọ Instagram.
Ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ Facebook jikọtara na ShortStack gị, mmapụta ga-apụta na-arịọ gị ka ị banye na Facebook - ọ bụrụ na ọ mere, banye na akaụntụ ahụ nwere njikwa ịnweta Facebook Page nke akaụntụ Instagram gị bụ jikọọ
Ozugbo emere nke ahụ, a ga-enye gị ndepụta nke ibe na akaụntụ Instagram ọ bụla ejikọtara; pịa nke ị chọrọ iji.
Na ubi nyere, tinye hashtag ị chọrọ iji dọpụta ndenye. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji ọtụtụ hashtags, kewa onye nke ọ bụla na a rikoma; mara na ọ bụrụ na ị na-eji ọtụtụ hashtags, ndepụta ahụ naanị ga-adọta ndenye na-eji ihe niile hashtags enyere (yana akara akaụntụ gị). Ihe nlere ga - egosiputa aka nri ya na ihe post kwesiri itinye ka adota ya.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ itinye aha njirimara Instagram na ndepụta aha ojii, ma ọ bụ tọọ ọnụ ọgụgụ kachasị nke ndenye ọ bụla site na onye ọrụ, pịa Gosi Ntọala di elu, ma mee mgbanwe n’ebe ahụ. Mgbe ịmechara, pịa Chekwa & Wepu.
Site ebe ahụ, ịmechara! A ga-akpọghachite gị na faili ntanetịime nri, ị ga - ahụ ndepụta ọhụrụ gị na ndepụta ahụ.
Bido na ShortStack
Ngosipụta: Anyị bụ ndị Mgbakwunye nke ShortStack
Tags: ndị nnọchiteanyanakọta ọdịnaya ndị ọrụ na-emepụtaashtag zooOnyinye hashtagotúobere akpa